Mindọ aka na ntị ndị uwe ojii Garmin | Martech Zone
Mindọ aka na ntị ndị uwe ojii Garmin
Fraịde, Septemba 1, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Nke a bụ echiche m ijeri dollar maka ụbọchị ahụ!
Gịnị ma ọ bụrụ na Garmin (ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ngwaọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ na akpaaka) wuru na ndị na-achọpụta laser / radar tinyere bọtịnụ iji jide onye na-ekwupụta ọnọdụ nke ọnyà ọsọ ma ọ bụ onye uwe ojii? N'ụzọ ahụ, tupu m ruo ọnyà ọsọ ma ọ bụ n'okporo ụzọ echekwara, ngwaọrụ m dọrọ m aka ná ntị tupu m nọrọ. Ọ bụrụ na laser / radar anaghị eburu ya, mmadụ nwere ike ịkọ ya site na bọtịnụ ahụ. Akuko nwere ike ịbụ na ngụ oge… naanị gosi ma ọ bụrụ na kọrọ n'ime awa.
Adịghị m ọsọ ọsọ, mana achọpụtara m onwe m inweta tiketi 1 kwa afọ 1 ma ọ bụ abụọ. Na nnukwu ịkwọ ụgbọala, anaghị m enwe ezumike. Ọ na-ewute m n'ihi na tiketi na-agba ọsọ dị obere banyere ịkwụsịlata ndị ọkwọ ụgbọala na-adịghị mma ma nwekwuo nchebe na ihe gbasara ịkwalite ego maka mpaghara ahụ. Nke ahụ ekwesịghị ịbụ ihe mgbaru ọsọ nke tiketi.
N'ihi ya, m ga-ahụ ụzọ iji zere ha kpamkpam. Ọ bụrụ na m nwere ike ịzụta ngwaọrụ dị ka nke a, m ga-eme ya echi!
Ogologo Ogologo: Ihe osise na-atọ ọchị si gapingvoid.com